September 7, 2009 na 2:34 obi
M nwere ike ịhụ obere ahụhụ na ngwa mgbakwunye Wordtube.
Mgbe actication nke transposh na Playlist si Wordtube na na anamidiọk. Na show nkiri ọzọ.
Naanị realy oké ngwa mgbakwunye !!!
September 7, 2009 na 2:45 obi
Nwekwara ga-egbochi ndị NGG Diashow. Ga-egosi na ihe osise ọzọ…..
September 9, 2009 na 11:13 na
Ana m echefu oghere peeji nke mgbe agbali iyi gị ngwa mgbakwunye sụgharịrị. M na-agbalị wụnye ọhụrụ version nke ngwa mgbakwunye na WP 2.8.4 na Foliotastic isiokwu ye 'Day na Name’ Permalink ndoko. Ọ bụla echiche banyere otú e si edozi ihe a nke?
September 10, 2009 na 6:06 obi
ndewo, anya ukwu Ná ekwe. -Amasị m mata ma ọ bụrụ na gị na asụsụ nsụgharị ngwa mgbakwunye na-akwado Lighttpd?
September 10, 2009 na 10:50 obi
M ghara ịhụ ihe ọ bụla mere ya na ọ ga-arụ ọrụ na WordPress n'okpuru lighttpd, ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla nsogbu, dị nnọọ ka m mara
M. Jans na-ekwu,
September 11, 2009 na 2:21 obi
Ndewo… nke a bụ nnọọ n1 ngwa mgbakwunye, ma m nwere 1-3 Ajụjụ… na i na-atụ gị nwere ike na-agwa m whats azịza 😉 ?
1. Ị nwere Caching System?
2. N'ihi na ihe ndị 2 Ọnọdụ n'Ụlọ Mkpọrọ? oroma / green
3. Gị ngwa mgbakwunye bụ Sọl wee ezi ihe mere i Na-ere ya? Ma ọ bụ, m nwere ike ịzụta ya ehichapụ Backlink?
I nwere ike ịza m site Mail ma ọ bụ ebe a ka a post…
September 13, 2009 na 8:22 na
1. Ee, APC dị n'ime oghere mee ihe ebe inaha
2. Akpa show ọganihu akpaka translation, mgbe nke abụọ na-egosi na ọganihu nke izoputa utịp gị na ihe nkesa
3. Daalụ maka otito, M ka na-enwe n'ụzọ na-aga, ị nwere ike iwepu backlink ka ị na-asọpụrụ ndị ngwa mgbakwunye ikike (na-eme ka isi iyi gbanwetụrụ inaha) M ga-ichu nta gị ma ọ bụrụ na ị na-ewepu ya na-enweghị ka, ma m ga-amasị ya ma obu, ya n'ebe ahụ dị nnọọ ka aka propagation nke ngwa mgbakwunye nke uzo aka ya mma.
Na-eche na-akpo m
September 13, 2009 na 9:59 obi
Ndewo…. ya m ọzọ…. ime na-arịọ ka ewepu njikọ ke tranlation wijetị na gbakwunye ya footer… ga na-adị mma ka unu? ama ma ọ bụrụ na mere na ọ … ga-eziga gị URL maka nlele….
September 13, 2009 na 6:13 na
Daalụ maka nke a magburu onwe ya nkwụnye. Algọridim maka translation software nọgidere na-na-mma.
Na na na, ya ezigbo nkwụnye a nwere ụfọdụ azụmahịa viability. Ị pụrụ ọbụna na-enye n'efu version ahụ na-ere a premiom mbipụta. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị na dị nnọọ omiiko banyere translation ahụ dị ndime a “inye a oru ngo” ma ọ bụ “ịzụta m coffe” Paypal button ka gị patrons pụrụ ikpu ị.
September 17, 2009 na 11:28 obi
Nke a bụ egwu.. Ka m kwuru okwu ikpeazụ m ikwu!
M dị nnọọ anya ma na ọ ga-ekwe omume ajụrụ ikikere edezi ụfọdụ n'asụsụ ahụ n'ozuzu ha n'ihu ọha.
Dị ka ihe atụ m inweta chọrọ ya na saịtị dị isi European asụsụ Chinese.
Otú ọ dị ya na chọrọ ya onwe ya ruo ịsụgharị English ma nwee obi ụtọ n'ihi na ndị ọzọ na ịsụgharị ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
N'ikpeazụ, ma ọ bụrụ na a na-asụ asụsụ vandalized enwere ụzọ ịlaghachi ndabara google translation?
PS m gbalịrị ịme ntuli aka 5 kpakpando ahụ WordPress plọg na ndekọ ma na-egosi ga-errror n'oge! 🙁
September 22, 2009 na 1:18 na
ndewo ebi akwukwọ, m ga-esi otu njehie mgbe ana m rụọ ọrụ a ngwa mgbakwunye. ọ na-ekwu: "Parse njehie: syntax njehie, na-atụghị anya T_STRING, anya T_OLD_FUNCTION ma ọ bụ T_FUNCTION ma ọ bụ T_VAR ma ọ bụ '}'Na /mnt/web2/41/43/5969543/htdocs/ebenbild/ebenbild/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/core/parser.php na akara 26 "
ike na onye ọ bụla aka?
Jonas na na na-ekwu,
October 21, 2009 na 1:21 obi
M wụnye ihe a na-akpali akpali ngwa mgbakwunye na brandnew WordPress 2.8.4 na saịtị na-enweghị nsogbu na. Ma mgbe ahụ,, ọ bụ ezie na ọ na akpaaka-sụgharịta si google nnọọ nke ọma, o yiri ka ntuziaka na-edezi na-nọ / ịchekwa. Mgbe ọ bụla Akwajuru ahụ na akpaaka-sụgharịrị okwu mmapụta. M hụrụ apropriate transposh tebụl na-efu. Nke a yiri ka a isi ahụhụ na otú a sụgharịa oké plugin ugbu a na-abaghị uru 🙁 . Ọ bụla echiche na-adara…